Dalalka Carbeed ayaa kufar gala dembiyada, ugu badnaan nabadgelyada sahanka dunida
Dubai Taariikhda Siyaasadda iyo Ganacsiga
Published by Shirkadda Dubai City at June 3, 2019
Deynta - National.ae
Emirates Waxay leedahay mid ka mid ah heerarka dambiyada adduunka ugu hooseeya!
Dubai waxay leedahay mid ka mid ah heerka ugu hooseeya dembiyada dunida
Our yaab leh Dubai waxay leedahay mid ka mid ah heerarka dambiyada ugu hooseeya ee adduunka, iyo 2018 waxaa lagu qiimeeyay magaalada sideedaad ee ugu nabadgelyada badan adduunka. Hay'adda Ilaalinta ee Wershadaha Amniga ayaa dambiyada u kala saartay lix qaybood. Dambiyadaan waxaa ka mid ah xatooyo, dhac qasab ah, tuug guri, khiyaano, kufsi iyo faraxumeyn, iyo waxyeelooyin dambiyeed.
Sida bil kasta Gulf News, Booliska Dubai ayaa sheegay in dambiyada Dubai ay hoos u dhaceen 15% intii lagu jiray 2017. Haseyeeshee, kiisaska hawlgalka daroogada ayaa kor u kacay sideed boqolkiiba. Major-General Abdullah Khalifa Al Merri, Taliyaha Guud ee Booliska Dubia, ayaa amaanay ciidanka oo xalliyay 86% kiisaska danbiyada.
Credit: Bogga internetka ee Booliska Dubai
Dalalka Carbiska ayaa kudhaca dembiga, ugu sarreeya amniga sahanka dunida,
Ciidamadeena Booliska ee 2020 ayaa kudhaawacmay "filimka ugu sareeya ee bilayska adduunka" - Waxaan hadda ku jirnaa BARASHADA DAMBE! SUV-ta aadka loo cusbooneysiiyay wuxuu kudhacayaa muuqaal cusub oo xoog leh iyo barnaamijka aqoonsi ee fool ka fool leh!
Wadamada carabta ayaa dhibco hoose ka hela dambiyada, kuwa ugu sareeya nabadgeliyada sahanka adduunka UAE
Dalalka Carabta ayaa kudhaca dembiga, ugu sarreeyaa nabadgelyada sahanka caalamka ee UAE
Kiisaska la xiriira daroogada ayaa hoos u dhacaya
Kiisaska daroogada ayaa sidoo kale hoos u dhacay sannadihii 5, oo laga soo bilaabo 15 halkii 100,000 ee ku yaalla 14.3 ee 2017, halka dembiyada tahriibinta dadka ay ku diiwaangashan yihiin heerarka ugu hooseeya adduunka, oo ka soo jeeda 0.2 ee 2013 ilaa 0.1 ee 2017.
Al Mansouri wuxuu xusay in Booliska Dubai ay yihiin kuwa ugu horreeya ee Imaaraadku aasaasay waaxda la-dagaallanka dambiyada, marka lagu daro kooxaha amniga ee gaarka ah si ay ula socdaan meelaha ay ka dhacaan falalka amni-darrada - sida guryaha la dayacay iyo baabuur - hareeraha Imaaraatka isla markaana ka warrama. Booliska ayaa markaa qaadaya tallaabo looga hortagayo nooc kasta oo dembiyo ah meelahaan.
Sarkaal boolis ah wuxuu xusey in mas'uuliyiinta amniga ee Dubai ay u shaqeynayaan si waafaqsan tabaha mustaqbalka ee ku saabsan amniga, taas oo ka dhigaysa tii ugu nabdoon meel adduunka oo dhan sida tilmaamayaasha oo dhan, sida dareenka kor loo qaaday ee amniga iyo badalida fikradaha laga qabo shaqaalaha booliska.
Inkasta oo ballaarinta degdegga ah ee emiratka, booliska Dubai ayaa si firfircoon uga shaqaynaya sidii looga hortagi lahaa dambiyada caalamiga ah ee saameynaya UAE, sida daroogada iyo daroogada internetka. Sharciga sharciga ah ee waddanka ayaa ah mid ka mid ah kuwa adduunka ugu xooggan, oo u shaqeynaya sidii looga hortagi lahaa qaab-dhismeedka nabadgelyada, ayuu yiri Al Mansouri.
Darawaliinta Booliska Dubai oo baadhitaan ku socda
Mootooyinka la duulay waxaa sameeya shirkad Ruush ah Hoversurf. Hoverbike waxay u oggolaanaysaa bilayska inay kormeeraan taraafikada iyo goobaha waaweyn iyo si deg-deg ah u degdegaan. Waxay u fadhiisanaysaa mid waxaana u duuli kartaa daqiiqado 30-40.
Baaskiilku wuxuu sidoo kale u diri karaa feed video live. Bilayska Dubai ayaa dhigaya xawaaraha 20 ee baaskiilka xitaa haddii ay u maleynayaan inay sii dheeraan karto xitaa mustaqbalka. Waxay rajeynayaan in ay bilaabaan isticmaalka hoverbears labada sano ee soo socda.
Waa shimbir, waa diyaarad, waa bilayska oo ku yaal hoverbikes! Booliska magaalada Dubai ee loo yaqaan 'test-drove pover'
Waxaan xalinaynaa ku dhawaad ​​90% kiisaska dambiyada!
Dubai waxay leedahay mid ka mid ah heerarka dambiyada ugu hooseeya aduunka. Hey'adda Xeer-maamuleed ee hay'adaha amniga waxay soo bandhigtay dambiyada lix qaybood. Dembiyadaas waxaa ka mid ah xatooyo, khasab lagama maarmaan ah, tuugo guri, khayaano, weerar galmo iyo xadgudub, iyo dembiyo dambi.
Sida wararku sheegayaan, Booliiska Dubia ayaa sheegay in dambiyada Dubai ay hoos u dhaceen 15% sanadkii la soo dhaafay. Hase yeeshee kiisaska daroogada daroogada ayaa kordhay by 8% Major-General Abdullah Khalifa Al Merri, oo ah Taliyaha Guud ee Booliska Dubia, ayaa amaanay awooddii xallisay 86 boqolkiiba kiisaska dambiyada. Saraakiisha bilayska ayaa sheegay in aanu ka dambeyno denbiilayaasha iyo sababta oo ah in heerka denbigu uu hoos u dhacayo. Sida laga soo xigtay wargeyska Khalij Times, heerka dhimista xad-gudubyada culus ayaa hoos u dhacay 38% shantii sano ee la soo dhaafay.
Mas'uuliyiinta ammaanka ee Dubai ayaa ka shaqeynaya 24h!
Maqaalka waxaa loo qoray Shirkadda Dubai City waxaa qoray Amardeep Brar. Fadlan ila soo xiriir Linkedin.
U ogolow in aan soo bandhigo Avion HR Solutions, shirkad xoog leh oo ganacsi iyo xirfad shaqo xirfadle ah oo cagaheeda dejisay iyada oo ugu horreyn diirada saara tayada iyo waqtiga adeegsiga macaamiisha. Shirkadda waxaa la dhexgeliyay April'2013 by a a koox xirfadlayaal ah oo leh waayo-aragnimo ka mid ah tobannaan sanno ee Qoritaanka, Warbaahinta iyo Warshadaha Waxbarashada. Adeegyadayada hadda jira waxaa ka mid ah qorista Joogtada ah, Shaqaalaha Ku-meel-gaarka ah, Adeegyada Bixinta, Meeleynta Campus iyo Xilliga Xagaaga-Xilliga Qaboobaha. Waxaanu bixinnaa adeegyadan Pan India. Waxaan aaminsanahay in guusha aan la abuurin oo keliya dadyowga ugu sarreeya laakiin qaar badan oo ka mid ah urur kasta oo kaalin muhiim ah ka ciyaaraya; Sidaa daraadeed waxaan ka caawinnaa bixinta xirfadle xirfadleyaal ah oo heer sare ah oo heerarka kala duwan ee ururka.
Dubai City Shirkadda hadda siisa wax wanaagsan hagayaal ee Shaqooyinka Dubai. Kooxdayadu waxay go'aansadeen inay ku daraan macluumaadka luqad kasta anaga Shaqooyinka ku yaala Dubai. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, waxaad hadda ka heli kartaa hagitaanno, talooyin iyo shaqaalaynta United Arab Emirates oo leh luqaddaada.